अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि घटेको सेयर बजार र कारोबार रकम बुधबार किन बढ्यो ? - HelloKhabar
अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि घटेको सेयर बजार र कारोबार रकम बुधबार किन बढ्यो ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएसँगै ओरालो लागेको सेयर बजार बुधबार हरियो बनेको छ। खतिवडा बाहिरिएलगत्तै सेयर बजार बढ्ने धेरैको अनुमान भएपनि उनको राजीनामा पछि भने बजार रातो बन्न थालेको थियो।
सेयर बजार मंगलबार करिब साढे ७ अ‌ंकले बढेकोमा बुधबार पनि १३ अंकले उकालो लागेको छ । बुधबार २ अर्ब ५६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ हाराहारीको सेयर कारोबार भएको छ । मंगलबार करिब १ अर्ब ८० करोडको कारोबार भएको थियो।
अहिले अर्थमन्त्रीको राजीनामा लगत्तै बजार किन घट्यो र हिजो र आज किन बढ्यो भनेर लेखाजोखा तथा खोजीनीति पनि हुन थालेको छ । कतिपयले भने खतिवडा बाहिरिने पक्कापक्की भएसँगै पहिलेदेखि नै सेयर उठाएकाहरुले आइतबार र सोमबार नाफा बुक गर्दा सेयर घटेको र पुनः उनीहरु खरिदतर्फ लाग्दा बजार र कारोबार रकम दुबै बढ्न थालेको बताउँछन् ।
कोरोनाका कारण अन्य क्षेत्रमा शुन्य जस्तै बन्दा साना ठुला व्यापारी समेत अहिले सेयर बजारमा आकर्षित हुन थालेको बताइन्छ । केही समयदेखि बिमा तथा लघुवित्तमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदै आएको पाइएको छ । बुधबार पनि यो सुचक नै अरुको तुलनामा वृद्धि भएको छ।
शुक्रबार बढेको सुनको मूल्य आज घट्यो, यस्तो छ आजको कारोबार मूल्य
काराेबार September 27, 2020
लसुनको प्रयोगबाट यसरी घटाउन सकिन्छ पुट्ट निस्किएको पेट
समाज September 27, 2020
मुख्य समाचार September 30, 2020